Manelingelina | Zeevou
Na dia mpitantana fantsona fanapahana fantsona sy PMS aza i Zeevou, tsy izany no momba antsika. Izahay eto dia hampihena ny fiankinan-doha amin'ny OTA. Mila ny fanampianao izahay hanatanterahana izany.
Mijoroa amin'ny tongotrao
Data. Betsaka ny resaka momba ny maha-zava-dehibe azy. Fa ohatrinona ny fampiasana marina azy io? Izany dia miankina voalohany amin'ny fidirana… Raha manana adiresy mailaka mandroso fotsiny ianao ho an'ireo vahininao novokarin'ny OTA, dia tsy mpanjifanao izy ireo: an'ny OTA izy ireo. Fangatahana lehibe hatao? Tsy dia lehibe loatra. Ny fandefasana adiresy mailaka dia tapitra herinandro vitsivitsy aorian'ny fizahana, ka raha te hifandray amin'ny vahininao ianao dia ho hitanao fa tsy ho vitanao izany.
Lisitry ny marketing amin'ny mailaka
Zeevou dia mamela anao hanangana tahiry mora amin'ny adiresy mailaka tena izy ho an'ireo vahininao rehetra. Ny adiresy mailaka tena izy dia voaangona avy hatrany rehefa manamafy ny famandrihany ao amin'ny Zeevou ny vahiny, rehefa avy tamin'ny OTA izany. Manana fiasa vonona GDPR aza izahay izay hampihena ny olana amin'ny fifandraisan'ny angona vahiny avy amin'ny EU.
Manangana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa
Raha vantany vao tonga ny antsipiriany, dia ampahatsiahivina ireo vahiny mandritra ny fifandraisany aminao (na amin'ny mailaka na amin'ny faktiora) fa afaka mahazo fifanarahana tsara kokoa amin'ny alàlan'ny famandrihana mivantana aminao. Ahoana? Amin'ny alàlan'ny tranokala famandrihana mivantana izay omenay ho ampahany amin'ny fonosinay. Tsy vitan'ny hoe mandray famandrihana amin'ny alàlan'ny tranokala ianao, fa afaka mamorona pejy manokana ho anao ary mitantana bilaogy mihitsy aza! Raha te-hamorona fifanarahana manokana ho an'ireo vahiny miverina ianao dia manangàna fampiroboroboana izay mety hateraky ny kaody boaty manokana, ary zarao amin'ireo vahininao izany mba hampirisihana azy ireo hiara-hamandrika aminao amin'ny ho avy.
Famandrihana mivantana amin'ny fiara
Te handroso lavitra kokoa ianao ary hisarika famandrihana amin'ny alàlan'ny tranonkalanao? Tsisy olana. Azonao atao ny mampiasa ny fonenanao manokana sy ireo fiasa SEO mandroso hanatsarana ny tranokalanao ary hampitombo ny vintana hiseho eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana. Ankoatry ny fanatsarana teny fanalahidy, izahay koa dia manana sombin-karena manankarena miorina amin'ny tranokala omenay anao.
Any isika no mandeha. Izay no fomba hialantsika amin'ireo kaomisiona OTA ary hamolavola ny indostria. Ok, angamba tsy izany. Ny teknolojia dia tsy ampy hitondra fiovana lehibe amin'ny fitondran-tena. Ny ilaina dia ny fiovan'ny toe-tsaina ary amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa no ahazoana izany. Noho izany Ny Revolisiona Famandrihana mivantana!
Ka - inona no andrasanao?
Ampio izahay hanampy anao amin'ny fisoratana anarana amin'i Zeevou anio!